Nataon’i Trump nanafin-tava tamin’ny tanany avokoa ny tao Afghanistan tamin’ny fananiham-bohitry ny Sovietika tamin’ny taona 1979 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Janoary 2019 7:35 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Español, Svenska, English
Tsangambato tanana manarontava ao amin'ny zaridainan'i Tuileries ao Paris. Henri Vidal an'i Alex E. Proimos – Creative Commons 2.0
Matetika takatra amin'ny antsony afaram-pahamarinana ataony amin'ny fototra ara-politika nanohana ny fanentanam-pifidianany tamin'ny taona 2016 ny fanadihadiana ara-tantaran'ny filohan'i Etazonia Donald Trump — na milaza zavatra omaly izany na nitranga efa ampolony taona maro tany —.
Fa na iza na iza tiany ampiesonina tamin'ny fomba fijery malaza ratsy ho tsy araka ny tokony ho izy tamin'ny fananiham-bohitra nataon'ny Sovietika tamin'ny taona 1979 tao Afghanistan tamin'ny fiandohan'ny taona, nihanasiso tanteraka ny fanehoan-kevitra tany amin'io firenena aziatika atsimo io.
Tamin'ny taona 1978, nanao fanonganam-panjakana tao Afghanistan ny vondrona komonista Khalq sy Parcham, notohanan'ny Sovietika, namono ny filoha Sardar Daud Khan tamin'izany fotoana izany, ary nandripaka ny fianakaviany.
Avy eo nanova ny anarany ho Repoblika Demaokratikan'i Afghanistan ny firenena. Nitondra fiverimberenan'ny herisetra izay tsy afaka tamin'i Afghanistan intsony nanomboka tamin'io fotoana io izany fanonganam-panjakana izany.
Hafa anefa ny fomba fijerin'i Trump. Tamin'ny filankevitry ny governemanta nataony tamin'ny 2 janoary no nanoritsoritany ny fananiham-bohitra ho tahaka izao:
Firaisana Sovietika no nahafantarana an'i Rosia, Afghanistan no nanangana an'i Rosia, satria bankirompitra ry zareo niady tao Afghanistan. Ny antony nahatongavan'i Rosia tany Afghanistan, satria niditra tao Rosia ny mpampihorohoro. Nanan-jo ny hiditra tao ry zareo. Ny olona dia sarotra ny ady ary fongana ny fananan-dry zareo. Ary izany no nahatonga azy ireo tsy nifampiantso intsony tamin'ny anarana “Firaisana Sovietika” fa lasa “Rosia” indray. Maro amin'ireo toerana izay tsy renareo intsony amin'izao fotoana izao no tsy anatin'i Rosia intsony noho i Afghanistan
Nahazo setriny manindrona avy amin'ny Filoha Afghan Ashraf Ghani, ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Salahuddin Rabbani, ary ny lehiben'ny sampam-pitsikilovam-pirenena teo aloha Rahmatullah Nabil, izany fanambaràna izany sy setriny mihaja avy amin'ireo Afghan ambasadaoro.
Iray amin'ny tsara indrindra avy amin'izany ny avy amin'i Waheed Omar, Ambasadaoron'ny firenena ao Italia, izay nanolotra ny tantara fohin'ny fitsabahan'ny vahiny tao Afghanistan avy amin'ny sampam-pitsikilovan'ny (ISI) firenena mpiray sisintany aminy dia i Pakistan, rafi-panjakana ampangain'ny maro no niteraka ny fisandratana sy ny fijoroana maharitry ny Taliban.
Tsia, tsy nandefa mpampihorohoro tany URSS izahay tamin'ny taona 1979. URSS no nananika ny vohitray. Etazonia no nanampy ara-bola ny ISI mba hahavaky orona [ny Sovietika]. Avy eo ny ISI no nanampy ny mpampihorohoro hanafika an'i Etazonia. Avy eo nanafika anay i Etazonia hamono [ireo mpampihorohoro]. Ankehitriny miray fandriana amin'i ISI i Rosia hahavaky orona an'i Etazonia. Tafajabaka tao anatiny isika. Fiafaran'ny tantara.
Ny nofinofin'i URSS nandritra ny ady mangatsiaka tao Afghanistan izay niteraka fifanandrinana efa ho roapolo taona sy ny fisandratan'ny Taliban. Sarintanin'i Matthew White.
Ny takaitra navelan'ny komonisma tao Afghanistan
Nananiham-bohitra hatrany i Afghanistan teo amin'ny tantaram-pireneny, tamin'ny taona 2001 notarihan'ny vondro-tafika miara-dia amin'i Etazonia izay tian'i Trump hiala haingana sy tanteraka ny firenena ankehitriny ny farany indrindra.
Tao amin'ny lahatsoratra iray ho an'ny Mangal Media, i Mohammed Harun Arsalai, mpiara-manorina ny Documenting Afghanistan no nanazava hoe nahoana no ny fiitaran'ny komonisma notohanan'ny Sovietika tao Afghanistan no voamarika ho nampitondra takaitra indrindra tamin'ny fananiham-bohitra nataon'ny vahiny rehetra tao amin'io firenena io hatramin'izay.
Vao nifehy ny fahefana ireo vondrona (komonista) ireo dia ny namono izay rehetra ahiahiany ho manana fifandraisana na lavitra na akaiky amin'ny mpanohitra no nataony. Ny fankanesana mankany amin'ny moskea dia efa ampy hanaovany izany. Nanomboka nifamono ihany koa izy ireo. Ny famoretana naherisetra tamin'ny vahoaka sy ny famonoana ivelan'ny fitsarana nataon'ny komonista no nanosika ny vondrona islamika ao Afghanistan hanao fikomiana. Fa tsy mbola talohan'ny famonoana befahatany tamin'ny taona 1978 no niovan'ny Modjahidinina avy amin'ny hetsika miafina ho hetsi-pifaharan'ny vahoaka.
Tamin'ny Desambra 1979, nanapa-kevitra ny hananika an'i Afghanistan ny faribolan'ny Politburo sovietika noho ny fanadiana fa toa tsy mahatoky ny filoha tamin'izany fotoana izany, ny filoha Hafizullah Amin. Herinandro taorian'ny ady mavesatra dia mavesatra, novonoin'ny Sovietika i Amin, noraisiny ny fahefana tao Afghanistan, ary napetrany ho mpitarika vaovao an'ny RDA notohanan'ny Sovietika i Babrak Karmal. Niala tamin'ny toerany i Karmal tamin'ny taona 1986, tamin'ny fotoana efa mihoatra ny iray tapitrisa ny isan'ny maty ary mihoatra ny enina tapitrisa ny olona heverina ho nifindramonina noho ny ady.
Farany, tamin'ny taona 1988, nanao soniam-pifanarahana hamaranana ny ady tao Afghanistan ny RDA, URSS, Etazonia ary i Pakistan, ary nanomboka ny fisintahan'ny tafika sovietika. Tamin'ny taona 1989, tafala tanteraka avy tao Afghanistan ny andiatafika sovietika rehetra, fanekena hitamaso ny fahareseny.
Andia-tafika Sovietika nody avy tany Afghanistan. Saripikan'ny arsiva RIAN. Nisongadina tao amin'ny Wikimedia Commons.
Diso tsotra izao ny fanambaràn'ny Filoha Trump hoe, “ny antony nahatongavan'i Rosia tao Afghanistan dia noho ny fizoran'ny mpampihorohoro nankato Rosia”.
Tamin'ny kabary iray tamin'ny taona 1980, nolazain'ny filohan'i Etazonia Ronald Reagan — ilay olona mahazatra an'i Trump hifaninanany — ho fandrahonana matotra dia matotra ny fandriampahalemana ny fananiham-bohitra, satria ahiana hanitatra ny ambaindain'i Sovietika ho any Azia Atsimo Andrefana.
Nanamarika ny ambasadaoron'i Afghanistan any Sri Lanka, Atoa Ashraf Haidari, fa “na dia i Rosia aza” tsy hanohana izao fomba fandikana diso nataon'i Trump ny fananiham-bohitra izao.
Ny korontana nateraky ny fananiham-bohitra sovietika — sy ny firohotry ny fitaovam-piadiana na avy any Moskoa na ny avy any amin'ny tany Tandrefana — no nametraka ny fototry ny herisetra naharitra am-polony taona maro sy ny fahatongavan'ny Taliban ho eo amin'ny fitondrana tamin'ny taona 1996.
Izay rehetra manaraka ny tantaram-pirenen'i Afghanistan dia mahafantatra fa navadik'i @realDonaldTrump tanteraka ny antom-panafihana sy ny vokany. Tonga taminay ny fampihorohoroana noho ny fanonganam-panjakana komonista sy ny fananiham-bohitra sovietika.
…ary noho i Etazonia, amin'ny ampahany izay tsy nahatsiaro andraikitra tamin'ny ezaka fanadiovana – tsy niraharaha ny habetsaky ny fitaovam-piadiana sy ny vola (sy fampahatanjahana ideolojia) nafafiny handresena ny Sovietika taorian'izany faharesena izany…
Baraingo, goavana, ratsy endrika mandritra izany fotoana izany ny lova navelan'ny fanafihan'i Etazonia.
Nihasarotra sy nihamafy kokoa ny fifanandrinana fa mihamatanjaka ny fiokoan'ny Taliban ary mihabetsaka ihany koa ny fanafihana sivily ataon'ny mpiady nanono-tena ho mahatoky ny ISIS.
Hatramin'ny nanombohan'ny daroka baomba an'habakabaka tamin'ny Oktobra 2001, mbola tsy nahitana tsi-fandriampahalemana tahaka ny amin'izao fotoana izao i Afghanistan.
Folo valo amby taona, an'arivony miliara dolara maro, ary aina an'arivony nafoy taty aoriana, mihazakazaka handao ilay ady tsy hahazoany fandresena ankehitriny ny governemantan'i Etazonia, raha mbola mitabataba mafy ihany i Trump.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 11 Novambra 2021
Shina 29 Oktobra 2021
Ady & Fifandirana 02 Septambra 2021